Pôrtô Rikô (Etazonia) · Jolay, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Pôrtô Rikô (Etazonia) · Jolay, 2012
Tantara mikasika ny Pôrtô Rikô (Etazonia) tamin'ny Jolay, 2012
Poerto Riko: Vorona io… Fiaramanidina io… Aslan io!
Mediam-bahoaka28 Jolay 2012
Malaza amin’ny aterineto sy eny amin’ny rindrina amin’ny anarana hoe Aslan i Enrique “Kike” Arce, iray amin’ireo mpanankanto an-dalambe mitondra zava-baovao ao Poerto Riko. Nanjary fitaovana lehibe amin’ny fampandrosoana ny asany ny fahitana azy ao amin’ny aterineto, indrindra amin’ny firesahana amin’ireo mpanaraka sy mpankafy azy . Mampiaraka ny fitaovana ilaina...
Pôrto Rikô: Namerina Indray Ny Adihevitra Mikasika Ny Fampiasana Fiteny Roa Any An-tsekoly
Fanabeazana22 Jolay 2012
Niteraka fanehoan-kevitra avy amin'ireo mpanohana ary hatramin'ny mpanakiana ny fanambarana nataon'ny governemanta tao Pôrtô Rikô izay milaza fa manomboka amin'ny fidiran'ny taom-pianarana vaovao amin'ity volana Aogositra ho avy ity, ny fiteny ofisialy ampianarana ny kilasy rehetra any amin'ny sekolim-panjakana manerana ny firenena dia ovaina miandàlana ho amin'ny fiteny anglisy raha...
Puerto Rico: Tohana Mafonja Ho An'ny Tany Sy Ny Fambolena
Fanoherana20 Jolay 2012
Maro ireo fikambanana samihafa nampitandrina momba ny fiankinan-doha ara-tsakafo mahazo an'i Puerto Rico ary ny maha-maika ny famelomana indray ny fambolena ao amin'ity firenena ity. Niaraka tamin'io antony io no nanaovana fihetsiketsehana hitakiana ny tsy hanerena ny Anjerimanontolon'i Puerto Rico hanome ampahany amin'ny taniny ho an'ny kaominina ao Gurabo mba...
Pôrtô Rikô: Niteraka Korontana Ny Fitsarana Ny Raharahan'i Francheska Duarte
Repoblika Dominikana11 Jolay 2012
Nodonin'ny sakaizany taloha tamin'ny fiara ary navelany tany amin'ny toby fitsaboana vonjimaika ilay vehivavy renim-pianakaviana antsoina hoe Francheska Duarte. Ilay mpitsara nomena andraikitra hitsara io raharaha io, dia nahita fa tsy heloka bevava no azo anamelohana an'i Jorge Ramos, sakaizan'i Francheska taloha fa nohon'ny tsy fikarakarana ilay marary fotsiny ihany....